Ukuvuza Okungcolile Okungenayo Ukuphuza Amanzi Amanzi China Manufacturer
Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd. [Guangdong,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Main Mark: Americas , East Europe , Europe , Oceania , West Europe , Worldwide Ngaphandle:71% - 80% Izikweletu:BSCI, ISO9001, CE, FDA, MSDS, Test Report Incazelo:Ibhodlela lamanzi le-Silicone elingatholakali,Ukuvuza Okungcolile Amanzi Amanzi,Ibhokisi leMicimbi yamanzi
Home > Imikhiqizo > Amabhodlela Amanzi weSilicone > Amapulazi Emanzi Amanzi Ayingenakutholakala Ngaphandle > Ukuvuza Okungcolile Okungenayo Ukuphuza Amanzi Amanzi
Izimpande Zethu Zokuphuza Amanzi Ezingcolile Zama- Silicone Amanzi Amanzi Ahlulekayo abuyele emakethe kusukela ekuqaleni, kuyimangalisa
ibhodlela lamanzi elizoliphakamisa kumngane wakho emva kokulisebenzisa, ngezansi kukhona inzuzo ebhodleleni lethu lamanzi.
UKUQALA IZINDLELA ze-PROOF-3 ezihamba ngobufakazi bokuklama, awudingi ukukhathazeka mayelana nokuvuza.
OKUNGAKHOLEKILE - okunzima ngokwanele ukuze usinde amaconsi nge-flexible, shatter-proof body body, ukuqinisekisa ukuthi uhlala
UKUPHILA - okwenziwe ngezinto zokugcina ukudla okungu-100%; mahhala i-BPA, i-BPS, i-PVC, i-phthalates, ihola, i-latex, namanye amakhemikhali e-leaching ayingozi
Amabhodlela wamanzi angaphandle aphephile angaphandle kwezemidlalo yiyona imikhiqizo esemqoka enkampanini yethu. Amabhodlela ethu amanzi angaphandle aphethwe yi- Outdoor ngokuyinhloko ikakhulukazi ekusebenzeni kwethu kwendawo. Okubalulekile kwamabhodlela ethu amanzi angaphandle aphethwe yi- Outdoor yi-100% ye-BPA ebangeni lobuchwepheshe bebanga lobuchwepheshe kanye ne-PP. Amanzi egoqekayo zemidlalo ze-Outdoor amabhodlela yethu ngokuphelele non-enobuthi, futhi ovunyelwe iSigungu FDA / SGS / LFGB / CE. Kuyinto enothile, engazinzile. Ngakho ngiyaqiniseka ukuthi i- bpa yethu ikhululekile ibhodlela lamanzi lingcono kakhulu kuwe .Siye senza umkhiqizo we-silicone iminyaka engaphezu kwengu-10, kanye nebhizinisi lamazwe angaphezu kweminyaka engama-4. Sinesipiliyoni seminyaka eyisishiyagalolunye ekukhiqizeni Amabhodlela wamanzi angabheki , Amabhodlela wokuhamba we-silicone , ama- Silicone ahlukahlukene , Izingane ezithinta umgexo , Amakhemikhali ahlaziya amathoyizi , Izingane ezihamba nge-pacifier clips , I- Baby teething mitten , njll. Okokugcina, Siyizimboni, ngakho-ke singakunikeza izimpahla ngentengo yokuncintisana ngekhwalithi ephakeme kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe.
Ibhodlela lamanzi le-Silicone elingatholakali Ukuvuza Okungcolile Amanzi Amanzi Ibhokisi leMicimbi yamanzi Ibhodlela Lamanzi Elilincane Elingahlanzwa Ibhodlela lamanzi lika-Silicon Ibhodlela lamanzi elenziwe ngamakhemikhali Ibhodlela leMidlalo leMidlalo elingabonakali Ibhodlela lemanzi elisha elimnandi